लगभग सबैको कस्तो बारुला चिल्नु थाह छ। यसको प्रभाव बाल्यकाल देखि धेरै लागि परिचित छन्। सुनिंनु, गंभीर दुखाइ, खुजली, राता - यो खानको लागि एक मानक प्रतिक्रिया हो। तथापि, कीरा आक्रमण को प्रभाव कहिलेकाहीं धेरै कठिन छन्। र यो मामला मा यो पीडित गर्न पहिलो सहायता प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले गरेको एक बारुला एक चिल्नु देखि सुनिंनु हटाउन कसरी हेरौं।
अक्सर, को बारुला चिल्नु एकदम अप्रिय, तर खतरनाक provokes। क्षतिग्रस्त क्षेत्र swells, चोट गर्न सुरु, र त्यसपछि नै बलियो चिलाउनु महसुस गराउँछ। तर केही दिन पछि, यस्तो लक्षण spontaneously, कुनै उपचार लिइएको थियो भने पनि समाधान।
एक बारुला चिल्नु एक बरु गम्भीर परिणाम निम्त्याउँछ जब तर, अवस्थामा छन्, र कहिले काँही घातक। यो के जटिलताहरू हुनेछ भन्न गाह्रो छ। एक खानको पछि प्रभाव venom व्यक्तिगत संवेदनशीलता भर पर्छन्। उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कीराहरूको को प्रकारको छ।
त्यसैले ध्यान दिएर विचार, तपाईं एक मौरी एक सिकार बन्न वा बारुला अझै पनि छ। पहिलो बाक्लो शरीर फरक र Shaggy छ। बारुला को पतला कीराहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो हल्का-रंग र hairs को एक न्यूनतम संख्या द्वारा प्रतिष्ठित छ। निम्न छलफल गर्नेछन् कसरी edema हटाउन बारुला चिल्नु देखि। माहुरीको तपाईंलाई stung भने, आवश्यक पहिलो सहायता केहि फरक छ।
अधिकांश मानिसहरू कीराहरू आफ्नो susceptibility को पनि सजग छैनन्। त्यसैले यसलाई बन्द मानिस राम्ररी सहयोग र कसरी एक बारुला एक चिल्नु देखि सुनिंनु हटाउन थाह प्रदान गर्न सक्षम थियो कि अति महत्त्वपूर्ण छ।
कीरा आक्रमण को नतिजा
कसरी wasps को खानको देखि सुनिंनु हटाउन केलाउँदा अघि, का सिकार के जटिलताहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ मा, हेरौं।
निम्न लक्षण प्राय अवलोकन छन्:
जल, गंभीर दुखाइ;
Tissues को सुनिंनु।
साथै, प्रभाव खुलारूपमा को खानको स्थान मा निर्भर गर्दछ। एक व्यक्ति अनुहार पीडित हुँदा सबैभन्दा खतरनाक स्थिति हो। को खानको को श्लेम लाग्एको झिल्ली वा ओठ मा भयो भने, यो एकदम साँस बाधा हुन सक्छ। अत्यन्तै अप्रिय, यदि यो बारुला चिल्नु हुनेछ आँखा क्षेत्रमा। यो शताब्दीमा, tearing को गंभीर सुनिंनु तिर जान्छ, छुट्टी भिन्न देखिन सक्छ। आँखा झिल्ली को सुनिंनु - यो अवस्था कहिले काँही जटिल panoftalmitom छ।
को नैदानिक चित्र बिरामीको उमेर, व्यक्तिगत सुविधाहरू मा, पाठ्यक्रम, बाइट्स को संख्या निर्भर र। त्यसैले, उदाहरणका लागि, धेरै कठिन wasps गर्भवती महिला र बच्चाहरु, साथै एलर्जी झुकाउ भएका मानिसहरूलाई "बैठक" सहनु छ।
त्यहाँ धेरै बाइट्स एक व्यक्ति हुन् भने, विकृति नशा को लक्षण सँगसँगै छ:
सास को shortness, हृदयमा दुखाइ, tachycardia;
टाउको दुखाइ, अचानक चक्कर आना;
पेट दुखाइ, वाकवाकी;
यसलाई चाँडै एक व्यक्ति एलर्जी झुकाउ मा एक बारुला एक चिल्नु देखि सुनिंनु हटाउन कसरी थाहा महत्त्वपूर्ण छ। बारेमा अप्रिय लक्षण शरीरमा कारण blisters संकेत हुन सक्छ, urticaria। को दाना लगभग सधैं एक सजिलै देखिने खुजली सँगसँगै छ।
विशेष एक खतरा छ , angioedema यस्तो लक्षण प्रकट:
को परेलिहरु, अनुहार, हात, ओठ को गंभीर सुनिंनु;
को श्लेम लाग्एको को सुनिंनु खोकी, हल्ला साँस भौंक choking, देखिन्छ hoarseness;
अनुहार रातो उत्तेजित गर्दछ, र त्यसपछि तीव्र गतिमा हराउँछ;
कहिलेकाहीं Coma वा मृत्यु प्रगति।
धेरै खतरनाक anaphylactic आघात। यो अवस्था एक सेकेन्ड को खानको पछि कुरा मा विकास।
जब डाक्टर गर्न जरुरी यात्रा आवश्यक?
त्यहाँ परिस्थिति जहाँ सिकार जरुरी चिकित्सा ध्यान आवश्यक छन्। कुनै पनि ढिलाइ एकदम गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
डाक्टर निम्न अवस्थामा एक बारुला चिल्नु विशेषज्ञहरु परामर्श गर्न जरुरी आवश्यकता छ कि जब चेतावनी:
पीडित एक एलर्जी प्रतिक्रिया विकास: कठिनाई भएको घाँटी वा मुख, कठिन बोलीको सुनिंनु, सास, त्यहाँ छाला को सतह मा एक कमजोरी त्यहाँ profuse दाना हुन्छ, त्यहाँ एक बेहोश भ्रम थियो।
खानको एक बच्चा वा वृद्ध व्यक्ति हुन्छ।
मुख, घाँटी, आँखा को क्षेत्र मा अनुहार थिच्नुहोस्।
10 बाइट्स भन्दा शरीर को सतह मा।
पहिले wasps एलर्जी प्रतिक्रिया अवलोकन।
रोगी नशा को वर्तमान लक्षण: को खानको विद्रधि को साइट मा दुखाइ वृद्धि, देखा, ज्वरो देखियो।
एक बारुला चिल्नु, मौरीले एक अप्रिय प्रतिक्रिया विकास भने संकोच छैन। कसरी सुनिंनु हटाउन र यस्तो अवस्थामा एक व्यक्ति सुरक्षित गर्न, उहाँले मात्र एक योग्य विशेषज्ञ थाह छ।
त्यहाँ अझै पनि एक बारुला चिल्नु थियो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? कसरी सुनिंनु हटाउन? लेख मा फोटो हामीलाई लक्षण कस्तो अक्सर एक कीरा कारण विचार गर्न अनुमति दिन्छ।
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम - नआत्तिनुहोस्!
निम्नानुसार कार्य आवश्यक छ:
विष, को ऊतक मर्मज्ञ शरीर गर्न हानि पैदा। घाउ बाहिर यसलाई चूसना प्रयास किन छ।
अब stung उत्पादन एसिड शामिल राख्न संलग्न गर्नुहोस्। यो कागति टुक्रा, स्याउ वा सुन्तला को एक टुकडा हुन सक्छ। यी उत्पादनहरू घाउ बायाँ विष को neutralization प्रदान गर्नेछ।
बरफ (प्याकेजमा), chilled धातु: प्रभावित क्षेत्रमा चिसो वस्तु गर्नु पर्छ।
विशेष गरी बच्चाहरु मदत
यो जीवाणु चिकित्सा बारेमा भूल छैन महत्त्वपूर्ण छ। यो बच्चा एक बारुला चिल्नु भएको छ, विशेष गरी यदि पहिलो सहायता मा एक महत्वपूर्ण लिङ्क हो।
कसरी बच्चा को सुनिंनु हटाउन? यो माथि वर्णन गरिएको छ कि सबै नियमहरू पालन गर्न सिफारिस गरिएको छ। तर यो आवश्यक जीवाणुरोधी लागूपदार्थ संग प्रभावित क्षेत्र व्यवहार गर्छन्। यो संक्रमण बाट घाउ रक्षा हुनेछ। आखिर, बच्चाहरु प्राय प्रभावित क्षेत्र comb छन्।
यी उद्देश्यका लागि, तपाईं कुनै पनि घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Zelenka लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
, आफैँ खोल्ने गर्न जारी wasps द्वारा bitten भएपछि सुनिंनु हटाउने, सार्वजनिक घटनाहरू हेर्न सिकार पहिलो सहायता प्रदान गर्न आवश्यक पछि।
सुरुमा प्रभावित क्षेत्रमा संकुचन लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसलाई धीमा एक रक्त प्रवाह प्रदान गर्दछ। यो विष को कारण बिस्तारै शरीर मा फैलाउन हुनेछ। यसलाई सकेसम्म चाँडो एक संकुचन आयातित गर्न आवश्यक त्यसैले छ। 30-50 मिनेट को एक औसत पट्टी।
साथै, यो औषधीय सामयिक तयारी प्रयोग गर्न Resort गर्न सिफारिस गरिएको छ:
"Fenistil जेल"। उत्कृष्ट उपकरण, दुखाइ र खुजली relieves कम सुनिंनु प्रभाव। जेल धेरै पटक एलर्जी को जोखिम कम गर्छ।
"Insektlayn"। पूर्ण एजेन्ट विरोधी भडकाऊ गुण भएको, र कुशलतापूर्वक दुखाइ हटाइ।
"Menovazin"। समाधान अपेक्षाकृत सस्तो घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने छ। एकै समयमा यो analgesic र antipruritic प्रभाव छ।
Gardex परिवार वा Gardex बेबी। वयस्क र छोराछोरी, बाइट्स को उपचार को लागि डिजाइन को लागि तयारी। धन reasonably नम्र कार्य हो।
"Soventol"। यो लेप उत्कृष्ट analgesic गुण छ।
"Advantan"। यो जेल एलर्जी प्रतिक्रिया को विकास बाधित गर्न सक्छन् कि एक शक्तिशाली कार्य द्वारा विशेषता छ।
दुर्भाग्यवश, छैन सधैं दबाइहरु हातमा छन्। अक्सर तिनीहरूले सबैभन्दा आवश्यक बिन्दु घटी छन्। कसरी हुन सक्छ, यदि शरीर "सौन्दर्य" बारुला चिल्नु? कसरी सुनिंनु हटाउन?
लोक उपचार अप्रिय अवस्था लड्न ठूलो रणनीति हुन सक्छ।
अब, राष्ट्रिय "चिकित्सकहरु" तपाईंलाई उपयोगी हुन सक्छ, सम्झना। यो प्रभावित क्षेत्र जस्तै धन लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ:
साग मूल (milled);
प्याज को एक टुकडा;
लसुन ल्वाड़ (कट);
कपडा एक आवश्यक तेल (प्राकृतिक) संग moistened।
उत्कृष्ट हटाउनु edema संकुचन निम्न। तालिका नुन वा पाक सोडा 1 चम्मच एक अनुपात मा सादा पानी संग पतला .. प्रति 200 एमएल तरल पाउडर। यस्तो साधन ऊतक moistened र 20 मिनेट को लागि प्रभावित क्षेत्रमा यो लागू हुन्छ।
यो केवल चाँडै एक बारुला चिल्नु पछि सुनिंनु हटाउन कसरी, तर पनि स्पष्ट कार्यहरू के यस्तो घटना मा अस्वीकार्य छन् बुझ्न बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
यो हुन छ:
चिल्नु खोजी। सम्झना, wasps घाउ मा नछोड। यस्तो कार्यहरू मात्र बहुमूल्य समय को कमी को नेतृत्व।
विष बाहिर squeeze गर्न प्रयास गर्दै। यस्तो घटना रक्त वृद्धि हुनेछ। फलस्वरूप, विष अधिक तेजी शरीर भर फैलाउन हुनेछ।
COMB वा घाउ रोज्नुहोस्। यस मामला मा, तपाईं संक्रमण बोक्न सक्छ। प्रक्रिया एकदम जटिल र रिकभरी ढिलाइ भएको छ।
जमीन क्षति वा फोहोर पानी मा प्रभावित क्षेत्र शांत लागू। यस्तो घटनाहरू धेरै चाँडै संक्रमण प्रदान गर्न सक्छन्।
यस्तो "Diphenhydramine", "Loratadine" को रूपमा आफ्नै प्रयोग बलियो एलर्जी दबाइहरु। अप्रिय प्रतिक्रिया को प्रदर्शन कम गर्न, डाक्टर ट्याब्लेट "suprastin" प्रयोग गर्न सुझाव दिन्छौं।
को खानको आफूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने
निस्सन्देह, कठिन पर्याप्त bitten भइरहेको विरुद्ध पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, तर बैठक wasps संग सम्भव छ को जोखिम कम गर्न।
यो गर्न, यी नियमहरू पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ:
प्रकृति जाँदै, शान्त टन लुगा रोज्नुहोस्। यो हात, टाउको र खुट्टा बन्द गरिएका अत्यावश्यक छ। अत्तर प्रयोग नगर्न।
सडक मिठाई, फल वा जामुन मा खान छैन।
को कर्कश हनन छैन।
तपाईं छेउमा बारुला गुजर भने, कुनै पनि अचानक आन्दोलनहरु लिने छैन आफ्नो हात wave छैन।
बारुला चिल्नु - यो एकदम दर्दनाक र अप्रिय समस्या छ। तर, दुर्भाग्य, यो गर्मी धेरै सान्दर्भिक छ। तसर्थ, माछा मार्ने वा प्रकृति जा रहेको छ, आवश्यक बाइट्स को एक प्रभावकारी माध्यम ले।
सेतो गर्मी: लक्षण, लोक उपचार र औषधि को घर उपचार
घर मा आँखा मा जौ को उपचार। चाँडै घर मा जौ को छुटकारा प्राप्त
आफ्नो हातमा एक प्लास्टिक बोतल देखि एक पुतली बनाउन
मानव अधिकार पुस्तामा: अवधारणा
लत को संकेत